एमाले नेतृ सहाना प्रधानको निधन | EuropeNepal.Net
एमाले नेतृ सहाना प्रधानको निधन
00Europe Nepal Tuesday, September 23, 2014
UML leader Sahana Pradhan died
नेपाली महिला आन्दोलनकी अगुवा एवं एमाले नेतृ सहाना प्रधानको निधन भएको छ । तीन वर्षदेखि नसाको समस्याबाट पीडित प्रधानको सोमबार राती ११ बजे निधन भएको एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठलेजानकारी दिनुभयो ।
Nepali women's move
ment leader and UML leader Sahana Pradhan has died. Three years suffering from nerve High died on Monday night at 11 o'clock, UML leader Krishna Gopal sresthalejanakari them.
८८ वर्षिय प्रधान बोल्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई गएको जेठ २३ गते मस्तिष्कघात भएपछि काठमाडौंको बयोधा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उहाँको उपचारकै क्रममा निधन भएको हो ।
88-year-old chief was not inaposition to speak. He has sufferedastroke on June 23 after the Kathmandu bayodha was admitted to the hospital. Died of his injuries while undergoing treatment.
उहाँको पार्थिव शरीरलाई मंगलबार विहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म पार्टी कार्यालय बल्खुमा राखिने र त्यसपछि अन्त्येष्टी गरिने एमाले नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
को हुनुहुन्थ्यो सहाना ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठकी पत्नी, शहीद गंगालालकी बुहारी, एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको सालीका रुपमा सहानालाई चिन्ने मानिस थोरै छन् । २००४ सालदेखिको राजनीतिक संघर्षमा खारिएकी र २०४७ सालको जन आन्दोलनकी सह–कमाण्डर सहाना प्रधानको छुट्टै परिचय र इतिहास छ । २००४ सालमा राणाविरोधी नारा लगाउने कनकलता, स्नेहलता, साधनासहितका चार महिलामध्ये सहाना पनि एक हुनुहुन्थ्यो ।
नेपाली महिला आन्दोलन, नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा मियो भएर काम गरेकी सहाना प्रधानको जन्म काठमाडौंको असनमा भएको हो । मध्यमवर्गीय व्यापारी परिवारमा जन्मेकी सहानाले दुई वर्षको उमेरमै आमाको काख गुमाउनु पर्यो ।
त्यसको दुई वर्षपछि हजुरआमा र बाबाका साथ बर्मा जानुभयो । सातौं कक्षाको पढाई सकेर विसं २००० सालमा उहाँ काठमाडौं फर्कनुभयो । २००४ साल बैशाख १७ गते पहिलोपटक संगठित रुपमा राणा विरोधी नारा लगाउने चारजना महिलामा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि उहाँ पक्राउ पर्नुभयो ।
महिलालाई शिक्षा दिलाउन १५ दिन आमरण अनसन बसेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर सहानासित झुके र महिलाले पनि पढ्न पाउने आश्वासन दिए । २००५ मा भाइसँगै लखनउ गएर आईए पढेपछि २००७ सालमा नेपाल फर्कनुभयो । त्यसपछि काठमाडौंको कन्यामन्दिर, शान्ति निकुञ्ज र सीताराम हाइस्कूलमा पढाउनुभयो ।
त्यसपछि उहाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा काम समेत थाल्नुभयो । २००८ सालमा जिल्ला कमिटी र २००९ सालमा अञ्चल कमिटीको जिम्मेवारी लिनुभयो । २००९ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठसँग उहाँको विवाह भयो ।
२०३५ सालमा पुष्पलालको निधनपछि पुष्पलाल समूहको नेतृत्वको पार्टीमा उहाँ प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो । २०४३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीको सचिव हुनुभयो । जनआन्दोलन २०४६ मा उहाँले बाममोर्चाको अध्यक्ष भएर आन्दोलन हाँक्नुभयो ।
२०४८ र २०५१ को आम निर्वाचनमा उहाँ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभयो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उहाँ पटकपटक मन्त्री पनि हुनुभयो । पार्टीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा मात्र होइन, महिला अधिकारको आवाज उठाउनुपर्दा उहाँ आफैं मोर्चाको अग्रपंक्तिमा उभिनुहुन्थ्यो ।
EuropeNepal.Net: एमाले नेतृ सहाना प्रधानको निधन